Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || कान्दामा स्याउ:बोट दुई सय, फल दुई दाना ! – kayakairan.com
कान्दामा स्याउ:बोट दुई सय, फल दुई दाना !
२२ भाद्र २०७६, आईतवार ०२:२२
राप्ती, २१ भदौ
स्याउ हिमाली क्षेत्रमा फल्ने स्वादिलो फल हो । उच्च पहाडी क्षेत्रमा पनि स्याउ खेतीको केही सम्भावना देखिएको छ । तर, तराई क्षेत्रका केही ठाउँमा परीक्षण गरिएको भएपनि सफल नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । करिब सात वर्षअघि चितवनको पहाडी इलाकामा रोपिएको स्याउको बोटमा भने दाना लाग्न थालेको छ ।
जिल्लाको राप्ती नगरपालिका–१३ स्थित कान्दामा रोपिएका स्याउका बोटमध्ये केहीमा दाना लाग्न थालेका छन् । गतवर्ष पनि केही बोटमा दाना लागेका थिए । असोज स्याउ फल्ने महिना हो । भदौमा स्याउमा फूल फुल्छ । स्याउका लागि फूल फुल्ने समयमा तापक्रम ० देखि ४ डीग्रीसम्म हुन आवश्यक हुन्छ । तापक्रम त्यसभन्दा माथि भयो भने व्यावसायिकरुपमा स्याउ फलाउन नसकिने बागवानीविज्ञ होमनाथ गिरी बताउँछन् ।
कान्दामा २०६९ सालको माघमा स्याउका करिब ५ सय बिरुवा रोपिएका थिए । यहाँका प्रायः घरमा स्याउका बिरुवा रोपिएका थिए । संरक्षणको अभावमा केही मरे । अहिले यहाँ करिब २ सय वटा स्याउका बोट छन् । “विद्यालय परिसरमै रोपिएको एउटा बोटमा फल लागेको छ । धेरै बोटहरुमा फूल फुले पनि फल लागेन”, स्थानीय कान्देश्वरी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक बालकृष्ण थपलियाले भने, “यहाँ आएका केही विज्ञहरुले आगामी वर्षदेखि सबै बोटमा फल्न सक्ने बताएका छन् ।”
हुर्किएका बोटमध्ये यसपालि एउटा बोटमा दुइटा फल लागेको छ । “दुइटा बिरुवा रोपेको थिएँ, दुई–तीन वर्षपछि मर्‍यो”, च्याउ खाएर आठ जना गुमाएको परिवारकी देवीमायाँ प्रजाले भनिन्, “च्याउले मान्छे मर्‍यो भनेर स्याउ रोपेको त्यो पनि मर्‍यो ।”विषालु च्याउ खाएर एउटै परिवारका आठ जनाले ज्यान गुमाएपछि यहाँ ‘कान्दा रुपान्तरण अभियान’ अन्तर्गत स्याउ, ओखर, आरु, रुद्राक्षलगायत फलफुल, विभिन्न किसिमका तरकारी तथा उन्नत जातका खाद्यवस्तु उत्पादन, पशुपालनलगायत अभियान चलाइएको थियो ।
खानाका लागि जंगल पस्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यहाँ स्थानीयको जीविकोपार्जन तथा स्तरीय शिक्षाका लागि मितेरी फाउण्डेसन र लक्ष्मी प्रतिष्ठान नामक गैरसरकारी संस्थाहरुले अभियानै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सोही अभियानअन्तर्गतको स्याउ खेतीलाई भने विज्ञहरुले ‘रहर मात्र’ भनेका छन् ।
मितेरी फाउण्डेसनका अध्यक्षसमेत रहेका पत्रकार एकल सिलवाल स्याउ खेतीका विज्ञ, प्राविधिकहरुले नै सर्वेक्षण गरेर खेती सुरु गरिएकाले एक दुई वर्षपछि सबै बोटमा दाना लाग्ने सम्भावना देखिएको बताउँछन् । “स्याउ रोपेको ७ वर्ष पुग्दैछ । सामान्यतया ८÷९ वर्षमा दाना लाग्ने हो”, अध्यक्ष सिलवाल भन्छन्, “केही वर्ष प्रतीक्षा गरौं ।” उनका अनुसार दैलेखमा १ हजार २ सय मिटरको उचाइमा रोपिएको स्याउको बिरुवा यहाँ रोपिएको हो । कान्दामा स्याउ रोपिएको क्षेत्रका उचाइ पनि यही हाराहारीमा छ । जुम्लाबाट ल्याइएको ‘रोयल डेलिसियस’ जातको स्याउको हरियो दानामा अहिले रातो लाग्न थालेको छ ।
तर, चितवनको कृषि कार्यालयमा लामो समय बागवानी विज्ञकारुपमा काम गरेका धनबहादुर थापा चितवनका कुनैपनि ठाउँमा स्याउ उत्पादनको सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन् । “सामान्यतया स्याउखेती मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला जस्ता हिउँ पर्ने ठाउँमा हुन्छ”, थापा भन्छन्, “चितवनमा यसका लागि ‘सिलिङ आवर’(आवश्यक समय) पुग्दैन ।” उनका अनुसार गुणस्तरीय स्याउ उत्पादनका लागि फूल खेल्नेदेखि फल लाग्ने समयसम्ममा कम्तीमा १६–१७ घण्टा तापक्रम शून्य डीग्री आसपासमा पुग्नुपर्छ । “तर चितवनमा त्यो सम्भावना छैन”, थापा भन्छन् । यस्तो अवस्थामा स्याउ उत्पादन भइहाले पनि स्तरीय नहुने उनी बताउँछन् ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरका बागवानी विभाग उप–प्राध्यापकसमेत रहेका विज्ञ होमनाथ गिरीका अनुसार चितवनलगायत क्षेत्रमा स्याउको उत्पादनको सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेपनि त्यस्तो जातको बीउ अहिलेसम्म भेटिएको छैन । “स्याउको उत्पादनका लागि भदौ र असोज महिनामा तापक्रम कम हुनुपर्छ”, गिरी भन्छन्, “चितवनमा यी महिनामा तापक्रम अत्यधिक हुन्छ । पहाडी क्षेत्र नै भएपनि चाहिने जति तापक्रम हुँदैन ।” हिमाली क्षेत्रका लागि तयार गरिएको बिउ नै चितवनमा लगाउनुलाई उनी ‘रहर मात्र’ भन्छन् ।
केही समय अघिसम्म पनि जंगलमा भेटिने कन्दमुल नै चेपाङ समुदायका अधिकांशको मुख्य खाना थियो । उनीहरुका लागि तरकारीको रुपमा जंगली च्याउ नौलो विषय थिएन । तर, २०६७ जेठ १४ गते खाएको च्याउ भने विषालु प¥यो । च्याउ खाएर एकै परिवारका आठ जनाले ज्यान गुमाए ।
कान्दाको विषयमा त्यसअघि सरकारी निकायलाई कुनै चासो नै थिएन । अन्यलाई पनि यस ठाउँको बारेमा कमै थाहा थियो । विषालु च्याउले निम्त्याएको दुखद घटनापछि भने यस ठाउँको विषयमा चासो बढ्यो । विस्तारै गैरसरकारी संस्थाहरुको अग्रसरतामा ‘कान्दा रुपान्तरण अभियान’ चल्यो ।
लक्ष्मी प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि मनोज श्रेष्ठका अनुसार स्याउका अलावा कान्दामा करिब ३ सय वटा रुद्राक्षको बिरुवा रोपिएका थिए । तर, ती बिरुवाले पनि संरक्षण पाएनन् । २–३ वटा मात्रै हुर्कने क्रममा छन् । स्थानीयबासीको जीविकोपार्जनमा सहयोग होस् भनेर तीन वर्षअघि आरु र ओखरका बिरुवा पनि वितरण गरिएका थिए । ओखरका बिरुवा हुर्कंदैछन् । आरुका केही बिरुवा पनि हुर्किएर फल दिन थालेका छन् । आरुका धेरै बिरुवा भने मरे ।
गोलभेंडा, सिमी, बोडी, फर्सी, करेला, चिचिन्डा, घिरौंलालगायत तरकारी तथा काँक्रो, मकै, कोदोलगायत बालीको उत्पादन भने केही वर्षयता राम्रो हुँदै गएको छ । साथै स्थानीयबासीलाई विभिन्न सीपमूलक तालिम पनि दिइएको थियो । चेपाङ तथा तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको यस ठाउँमा उत्पादन भएका वस्तु बिक्रीका लागि स्थानीयबासी घण्टौं हिडेर धादिङ तथा चितवनका बजार पुग्छन् ।